Ungazviita sei - Ikkaro
kudzidziswa >> Maitiro ekuzviita
Chikamu chekuunganidza chemavhidhiyo pamaitiro ekugadzira ezvinhu zvakasiyana.
Zvirokwazvo waona vamwe mu
Maitiro emabhangi epurasitiki eAustralia anogadzirwa
Wow. Australia inoshandisa mapepa epurasitiki anokwanisa kunyorova uye haaputsike. Kuwedzera pakuita yekunyepedzera kuoma. Uno ... Ramba uchiverenga
Kugadzira chigaro chemuhofisi
Zvakanaka kuzviita sei, hatina kutumira chero kwenguva yakareba. Hakuna ruzha asi iwe unogona kuona ese ... Ramba uchiverenga
Maitiro ekugadzira bhora renhabvu re2018, 2014 uye 2010 World Cup
Pakukumbira kweshamwari yangu Edgardo Confessore pafacebook (a kutsemuka kwema boomerangs) Ini ndinokusiira iwe mamwe mavhidhiyo uye zvishoma ruzivo nezve kombe yenyika yenhabvu bhora inogadzirwa sei.
Bhora reSouth Africa reNdebe yeNyika ye 2010 FIFA World Cup, anonzi Adidas jabulani. Yakagadzirwa neAdidas uye yakagadzirirwa uye yakagadzirwa mu University of Loughborough, muUnited Kingdom. Izwi Jabulani zvinoreva muchiZulu: fara
Bhora rinoumbwa nemasere masere ane hutatu-akasimba mativi-akaenzana, akaumbwa kubva ethylene-vinyl acetate (EVA) uye thermoplastic polyurethanes (TPU) kugadzira bhora rakatenderera zvakakwana.
Mas sandpaper anoitwa sei
Iwe unofarira kuziva maitirwo ezvinhu nezvinhu zvinogadzirwa sei? Tarisa uone Maitiro ekuzviita
Nhasi tinounza kuti sandpaper inogadzirwa sei.
Reel hombe repepa rinotambanudzwa, uye rinopfuudzwa neprinta inodhinda kune rumwe rutivi zviyo izvo sandpaper richava naro, semuenzaniso P80
Pane mumwe mupumburu, glue inoiswa kudivi risina kunyorwa. Kukwezva tsanga (makristasi) kubepa rakanamirwa, inobatidzwa nemagetsi uye inovakwezva zvekuti vazhinji vanonamira muglue.
Kugadzira uta sei
Ndinoda uta. Ini zvakare ndine imwe ye decathlon, iyo yandinayo nguva huru. Asi… Ramba uchiverenga
Iko paintball mabhora anoitwa
Nhasi Otrebor akatibvunza muhurukuro mubvunzo uyu nezve nzira yekugadzira pamba mabhora ebhora. Hatina kugadzirisa mubvunzo wako asi tinotarisira kuti posvo iyi inokupa imwe pfungwa uye iwe unogona kuigovana nesu
Isu tanga tichitsvaga ruzivo, zvese muchiSpanish neChirungu, uye chokwadi ndechekuti hatina kuwana mhinduro yekuzvigadzirira. Aya mabhora akaomesesa kupfuura iwo anoita kunge ari priori.
ari mipira Izvo zvinogadzirwa nezvinhu zvinogadziriswa zvigadzirwa uye zvekudya, isu tinogona kuzvidya uye hapana chingaitika kwatiri.
Iyo capsule inogadzirwa negelatin pamwe nemusanganiswa wezvimwe zvigadzirwa zvekudya, zvakavanzika. Iyo yemukati ine chikafu chekudya uye polyethylene glycol, inoshandiswa kugadzira manyuchi.
Tsono dze hypodermic dzakagadzirwa sei
Iyo hypodermic tsono ndeimwe yezvakagadzirwa izvo zvakagadzirisa hutano uye kuvandudza hupenyu hwedu. The… Ramba uchiverenga
Ma fluorescent machubhu anogadzirwa sei
Vhidhiyo inotevera yeiyo fluorescent chubhu yekugadzira system ndiyo yandaida zvakanyanya kusvika ... Ramba uchiverenga
Nzira yekugadzira nzungu nemabhaudhi
Vazhinji venyu muchafungidzira magadzirirwo anoitwa sikuruu nenzungu, asi zvakakosha kuti zvionekwe zvichirarama. Vari… Ramba uchiverenga
Simbi cheni dzinoitwa sei?
Maitirwo anoitwa ngetani. Pamwe pamwe nekanyoni ndeimwe yemibvunzo yandakazvibvunza kakawanda. USA … Ramba uchiverenga